ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: မြန်မာ့ ရှူခင်း ဓာတ်ပုံများ (၄)
ပြင်ဦးလွင်ပုံတွေက နည်းနည်းပိုများတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေက သေသေချာချာကြီး ရိုက်လာတာ မဟုတ်တော့ သိပ်မလှဘူး။ လူနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ရှူခင်းပုံတွေက ပိုလှပြီး ပိုစုံတယ်။ လူပုံဖျက်လိုက်ရင်လည်း ကြည့်မကောင်းမှာ စိုးလို့ မတင်ဖြစ်ဘူး။
ရေးပြီးချိန်: 9/07/2008 10:52:00 AM
a green land! thanks for sharing.
လန်းလိုက်တာ၊ လှလိုက်တာ၊ မနာလိုရှိလိုက်တာ..... ဓာတ်ပုံတွေပြောတာပါ။ ဘလော့ဂ်တန်းပလိတ်ကတော့ မဆိုးပါဘူး။ ဟဲဟဲ။ တော်တော်လေးမှ ချွေးပြန်သွားရဲ့လား။ စီဗောက်လဲမတွေ့ပါလား။ :)
ကို steve... မင်္ဂလာပါ။
ကိုလူသစ်... ခုလိုကျ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေး ကိုယ်ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်ရတာ ချွေးပြန်ဖို့တောင် သတိမရဘူး။ ဟဲဟဲ... ရန်ဖြစ်ရတာ မောလို့ စီဘောက် ပိတ်ထားတာ။ ခု ပြန်တပ်ပြီ။